fanontaniana B773ER olana
1 taona 11 volana lasa izay #294 by Dariussssss
OK, efa ny vaovao B773ER Filipina avy eto, ka misy olana amin'ny hydraulics. Ny iray amin'ireo rafitra, toa foana, ary na inona na inona ataoko, dia mijanona toy izany. Noho izany, izaho fotsiny zara raha afaka manalavitra dia novakiny teo amin'ny tany. Zavatra hafa rehetra toa OK, dia manidina tsara.
Ary tamin'ny ECAM ambony lamba, misy ny lisitry ny fahadisoana amin'ny hydraulics. Ireo rehetra manana zavatra atao amin'ny hydraulics rafitra C, ary ny ambany ECAM, fa ny iray no tena foana.
Izaho koa manana B772 entana alaina avy eto, miaraka amin'ny VC ihany, fa tsy misy fahadisoana.
Noho izany, misy fomba mba hamaha izany?
1 taona 11 volana lasa izay #354 by Gh0stRider203
Afo ny fikojakojana ry zalahy, ary hahazo vaovao tantsambo?
Rehetra vazivazy kely ... indrisy Tsy manana vorona io, ka tsy misy azoko atao be.
Efa nijery mihitsy kobany ny Kisendrasendra Ve?